Kungani hoot amapayipi amanzi? Indlela ukuqeda hum?
Uma uke waphila esikhathini esithile isakhiwo sokuhlala, wena usuzwile elikhulu libi engakunaki nokubhuza ngezinye izikhathi amapayipi amanzi. Kwezinye izimo, nokububula ungezwakala lapho ezindlini eziningana exhunywe kwi eyodwa yamanzi standpipe ukuthengisela, kwezinye izenzo buzz ipayipi phezu izinzwa ngesikhathi esifanayo bonke abakhileyo endlini. Ngezinye izikhathi umsindo angavela zinyamalale ngokuhamba kwesikhathi, futhi ngezinye izikhathi umsindo kwamanzi agobhozayo lizwakele njalo.
Kungani hoot amanzi amapayipi efulethini ebusuku? kungenzeka eziningana Izizathu zalokhu. Ake sihlole kubo ngokuningiliziwe ngezansi.
Izimbangela imisindo ompompi bamanzi noma izinto amapayipi amanzi Kungani-buzz
Imbangela ezivame kakhulu imisindo ezingemnandi ku amashubhu kukhona gaskets ezimbi elifakwe amapayipi ngezinye izikhathi. Sound kuwumphumela resonance oscillations gaskets kanye namanzi ngokusebenzisa amashubhu. Resonance icacisa umsindo bese ekudlulisela ke endlini. Kulokhu, kunzima kakhulu ukubona ukuthi yimaphi abantu abahlala kulo muzi endlini has inkinga amapayipi ngezinye izikhathi.
Uma amapayipi e buzz endlini akuyona njalo, bese imbangela umsindo - njengoba umthetho, iqoqo yamanzi omthombo omunye ezindlini noma ukuvulwa iziqashi empompini.
Uma i-buzz njalo waphawula ke isizathu yayo - umehluko ukugandeleleka yesikhuphukeli bamanzi ashisayo nabandayo. Lolu ketshezi isibambo komunye nomunye nge isikhuphukeli kuya isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu ephukile kwelinye emafulethini. Ngezinye izikhathi ama-valve kungaba kuphihlizwe ezindlini eziningana ezahlukene.
Kungani amapayipi amanzi hoot, lapho uvula valve? Mhlawumbe, inkinga itholakala ikhwalithi embi noma gasket sikhubazekile. Plumbing oseneminyaka engu Kunconywa ukuqeda ngomsindo owawenziwa amapayipi amanzi aqala ukulwa lomkhuba ezingemnandi ukuthola esikhundleni lwezimpawu engaphelele.
Ukucinga Izindlela crane okuyiphutha
Ukuze uhlonze efulethini ne ompompi okuyiphutha, udinga yanjalo ukukhubaza kwabo eyodwa ngesikhathi kusuka amapayipi amanzi ashisayo nabandayo bese ulalele itjhada osekonakala noma cha. Uma buzz ku amapayipi amile - efulethini ne amapayipi okuyiphutha ezitholakele.
Uma indlela ngenhla echazwe ukuhlola ngayinye ezindlini endlini, kodwa inkinga ayizange ixazululwe, cishe, ukuthi umsindo kubangela ulwelwesi valve ukuthi amabhlogo isikhuphukeli. Hlola lo mbono kungenzeka, vala impompi, ezidayisa amanzi standpipe. Uma umsindo iphele, inkinga itholakala yesikhuphukeli valve.
Khumbula futhi ukuthi uma une engaphansi ine amanzi olubanzi equkethe okuningi valve valve, buzz kungadala iyiphi valve shutoff. Kutholakale imbangela yokushona imisindo ezingemnandi ngaphandle koxhumano plumber abanolwazi kulesi simo kungaba nzima kakhulu hhayi ngokushesha ngakho njengoba singathanda.
Uma imbangela Kusengenzeka localize - uzibheka lucky. Ngu ukukhanda elula kuyoba lula ukususa.
Yini okufanele ngiyenze ukuze kuqedwe hum?
Gul avuse akubona bonke valve. umsindo kungenzeka imbangela ompompi noma valve izakhiwo akusebenzi nge valve futhi poluoborotnymi ikhanda izingxenye.
Modern ibhola valve noma labathaki bamafutha ezifana a induku yokudlala akanayo e gaskets yayo ukwakhiwa. Ngakho-ke, lapho ephendula amapayipi amanzi ukuza iyehluleka.
Ukuze balahle umsindo, ngezinye izikhathi asikho isidingo ukuthenga isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu entsha. Ngokuvamile ngokwanele ukuba ahlukanisa izingxenye ikhanda, susa gasket futhi silungise noma esikhundleni salo. izakhi ezinjalo zivame alengayo bekotele induku noma baye tapered emaphethelweni.
Amabhola gasket kufaneleka kufanele esikhundleni. A sikhubazekile, bobunjwa okungajwayelekile kungenziwa wasika nge sikelo. Khona-ke ikhanda izingxenye kufanele eqoqwe bese usetha emanzini. Uma ukulungisa kugqugquzelwa kahle, umsindo ngaphezulu akufanele kube.
Isixazululo esilula crane design ephelelwe yisikhathi - esikhundleni sako ulethe imodeli entsha ye-valve ibhola. Quality ibhola design kudala izinkinga ezimbalwa ukusebenza amanzi.
Iseluleko efanayo inganikelwa maqondana labathaki bamafutha akusebenzi. Miselela ubudala isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu imodeli entsha nomunye isigwedlo - ikhambi elilungile inkinga.
Kungani amapayipi amanzi ekhaya engakunaki nokubhuza: ezinye izizathu
Zokugwema ukuphuka of valve kanye ompompi kwamanzi agobhozayo - yisona esikhulunywa abantu abaningi, kodwa hhayi bonke sezizathu ukuthi kungenzeka abangela umsindo. Kwezinye izimo, i-buzz ku amapayipi kubangelwa izici, ukususwa okuyinto ezibizayo kakhulu futhi kudinga amandla kakhulu.
Lapho ukunciphisa ubukhulu ipayipi kokuba amanzi jet stream. Zenza ipayipi dlidliza, okuyinto imbangela umsindo efulethini.
Lokhu inkinga ingaxazululwa kuphela esikhundleni kwesigaba avimbekile we main amanzi.
Ukuze uhlole ukuthi kukhona ukuvaleka e ipayipi, kwanele ukukhubaza omunye labathaki bamafutha, futhi bheka ukuthi kwenzekani ipayipi. Uma ngaphakathi konke embozwe ungqimba obukhulu ukungcola, sekuyisikhathi ukushintsha uhlelo lokuxhumana.
Ezimweni ezingavamile, ukungcola angase buthelela amashubhu kuphela imikhawulo emigqeni. Uma usika ipayipi bese uzama ukusula izinjongo zabo, kukhona ithuba lokuthi inkinga umsindo uzonyamalala. Uma-ke ingabe usekhona, kuphela indlela yokuphuma - esikhundleni the line amanzi.
Kuyaphawuleka ukuthi hhayi kuphela othambekele odla we metal, kodwa futhi amapayipi epulasitiki kanye polypropylene. Isizathu ekuqongeleleni ukungcola - umehluko diameters pipe kanye hose kumpompi uma ukuso.
tube Kubi livikeleke
Vibration kungabangela hhayi kuphela ebhuqwini scurf ngaphakathi amashubhu. Uma ngesikhathi ukufakwa kwamanzi agobhozayo awuzange abethela kahle izindonga ke kuvulwa ngokuzumayo amanzi kampompi isando singenzeka futhi, ngenxa yalokho, vibration umsele.
Yingakho kubalulekile at the stage of ukufakwa entsha uhlelo kwamanzi ukulandelela izinga ukufakwa. izinkampani Ukwakhiwa uyayazisa idumela yabo, njalo ukuqinisekisa ukuthi ukufakwa kwamapayipi amanzi, ngisho nasezintweni ezincane lwenziwe kuzo zonke imithetho lobuchwepheshe.
Remedy izinkinga umsindo ngenxa amashubhu ezimbi livikeleke - ukufakwa zalapho ekhethekile phezu kwamanzi, kokulilungisa sikhundla lengiyo.
Kungani hoot amanzi amapayipi lapho valve ivaliwe?
Uma udaba uvaliwe ekhaya lakho noma ompompi evulekile efulethini wezwa ukuduma kwamanzi agobhozayo, ukuqala ukulungisa inkinga udinga engaphansi.
Egumbini ukuthola yesikhuphukeli kuyiphi amanzi lakho oluxhaswe. Kulula ukwenza, uma siqhathanisa indawo risers nge layout emnyango wakho. Futhi ungakwazi ukuzulazula izitebhisi.
Uma uzithola emanzini engaphansi ukuvuza, le amapayipi ngaphandle kokubiza eyodwa neze ngaphandle. Xhumana inhlangano ekhonza ekhaya lakho futhi ushayele onguchwepheshe. Yena uyakuba nawe wonke amathuluzi okudingayo, futhi ngokuqinisekile ngeke neze kube ujwayelene isikimu amanzi uxhumano egunjini elingaphansi yakho.
Futhi, njengoba ungashiyi emnyango izakhamizi ngaphandle kwamanzi ngokuvala into akuyona into ngephutha noma kulimaze noma yimuphi umphini. Kubalulekile futhi ukuba ukhumbule ukuthi ebusika amanzi ashisayo iphayiphi kungaba lokushisa eliphezulu kakhulu. Ukulungisa lemigqa enjalo idinga ukunakekelwa okukhethekile, ngoba igcwele ukusha.
Uma amanzi egumbini ngenxa wokuhlola engakaze lwembula, lokhu kuyadingeka ukuze batibute ngalokujulile omakhelwane, hhayi ukuthi zinokuthile olandelanayo.
Thola i-gasket amabi mixer ekhishini ngokuphazima kweso. Ukulimala gasket kuholela Ukungena amanzi ashisayo engena amakhaza amanzi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu ngoba yesikhuphukeli ne ashisayo ingcindezi ketshezi cishe njalo ngenhla.
Uma omakhelwane inhlolovo akazange nemiphumela ke kungenzeka ukuhamba emgwaqeni omkhulu bese uzama ukukhomba ngu indlebe ukuvaleka ezikhaleni ewumngcingo ipayipi. Ezimweni eziningi, amatshe kuwela ngaphakathi komqondo umphini izindlu noma uxhumano amapayipi amabili. Ukuhlola valve, ungase uzame bangagxambukeli uma kukhona wokuvula yayo egcwele kanye lokuvala.
Impendulo yombuzo kungani kuyachwaza amapayipi amanzi lapho amanzi efulethini kamakhelwane, ngokuvamile phezu. Ngemva kokuhlola le amapayipi omakhelwane, uqiniseka ukuthola valve kanye ompompi we akusebenzi noma eliphansi valve nge gaskets, noma isikhathi eside ayishintshi esigabeni yamanzi ipayipi.
Akuwona wonke umakhelwane uzovuma uqale ukulungiselwa izinto ezithile nesicelo sokuqala namanzi. Abantu bangase babheke inkinga yakho umsindo kunomsele, futhi mhlawumbe bengafuni ukuba bachitha isikhathi sabo benza nemali ukulungisa inkinga, okuyilona elisebenzayo futhi ukuthi wabo futhi angikholelwa.
A engqongqoza emendweni
Indlela yokuthola umthombo wokungqongqoza ku amapayipi? Ngenxa yalesi udinga indlebe ebukhali. Uma ngezikhathi wezwa amagalelo esindayo, ngakho-ke kungcono ukuba esikhundleni valve, vala yesikhuphukeli. Plumbing kusukela Ezezindlu ziyadingeka esikhundleni zalamaqembu.I ngesicelo abalimi.
Knock-e-ipayipi ke kungenzeka ukuthi umataniswe nge ushintsho lokushisa yamanzi yesikhuphukeli noma ukuphakela amanzi ashisayo. Ukuze kutholakale izinkinga ezimweni ezinjalo kubalulekile ukuhlola imigqa ukuhlonza izindawo lapho amanzi eza mbeni nezinye izinto umile.
Ezindaweni zabantu abahluphekayo livikeleke umugqa amanzi ukuze aqede ongqongqozayo besokunxele fixed, amahange noma ashiselwe.
Kungenzeka futhi ukuqeda contact kuzo ngemibhobho emibili, udala therebetween igebe, futhi ngaleyo ndlela ukuqeda ongqongqozayo ku amapayipi.
Chainsaw Makita EA3202s40B: ukubuyekezwa abanikazi
Amanzi emoyeni kwesihenqo "Teplomash": imfundo, izibuyekezo nezithombe
Ukwelashwa nokuvikelwa umdlavuza wamabele ngo-Israyeli, izici eziyinhloko
Obucayi Airy pie ku kefir
Isifinyezo, Nekrasov sika inkondlo isihloko "yesikole". ukuhlaziya le nkondlo
Ettli Klement - sezombangazwe esivelele kwekhulu lamashumi amabili. Attlee klemenet: izinqubomgomo zangaphakathi nezangaphandle